Ukuphupha ngentloko Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
"Intloko" njengesibizo sentloko yomntu ihlala ifumaneka kumaqhalo nakwiingcaphuno kulwimi lwanamhlanje. Siyathoba okanye sithobise iintloko zethu ukubonisa uxabiso kwaye siphumlise iintloko zethu ezidiniweyo emqamelweni. Xa sivuma impazamo okanye, mhlawumbi okungaqhelekanga, sithathe uxanduva lokuhamba gwenxa, sithi: Uthuthu entlokweni yam. Iingcwele zihlala ziboniswa nge-halo ezijikeleze iintloko zazo.
Ephupheni, uphawu "oluphambili" kufuneka lutolikwe ngokufanayo nentloko. Uthini ke ngoku xa uthoba intloko okanye uphulukana nentloko ephupheni?
1 Uphawu "oluphambili" lwephupha - ukutolikwa ngokubanzi
2 Umqondiso wephupha «eliphambili» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu "oluphambili" lwamaphupha - ukutolikwa kokomoya
Uphawu "oluphambili" lwephupha - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, intloko luphawu lomqondiso wephupha, oko kukuthi, usempilweni. Ingqondo yokucinga kunye nesishwankathelo samaphupha ngobomi bakho kunye neemvakalelo zakho. Ke ngoko, iintloko ezinokubangela ukudideka kunye noxinzelelo kubomi bemihla ngemihla, ukuba azisekelwanga kwimvakalelo yokwenene yokugula kubomi bokuvuka. Iphupha elo liphula intloko yakhe phezu kwento ethile. Inxeba lasentloko okanye ibhandeji nayo ibonisa inkxalabo.
Ukuba umntu ukrwela intloko yakhe ephindweni ephupheni, isenokuba ivela Ndinomona okanye abantu abanengxaki abachaphazela isigwebo sakho.
Ukuba uhamba ephupheni uphakamise intloko, kufuneka ulumke ungaziphakamisi kakhulu, kuba, njengoko kusaziwa, ikratshi liza ngaphambi kokuwa. Ukugoba intloko kubonisa ukuba umntu ophuphayo uyabona ukuba ukunye Ukunyelisa kwaye ukungcikivwa akunakufezekisa okuninzi, endaweni yoko kunokuzenzakalisa.
Unokufunda okuninzi malunga nekhanda lekhanda ephupheni. Izinwele ezintle, ezigcweleyo ezikhazimlayo zibonisa ukuba uvukile ndiziva ndithandwa, ukuhlanjwa kwentloko kunye neenwele kufuneka kutolikwe ngokufanelekileyo kwaye kumele a ixesha lokungakhathali.
Intloko enenkqayi, nangona kunjalo, ibonisa Kuhlekisa lonto iyakucaphukisa. Ukuba intloko yakho ichetyiwe ephupheni, le nkqubo ihlazayo ithetha a umcimbi ohlazisayouyazisola.
Ukuphupha unqunyulwa kungoyikisa kwaye koyikise, ngakumbi xa kunikwa ubugrogrisi obukhoyo beMbindi Mpuma. Kodwa ungakhathazeki: ukunqunyulwa komqondiso luphawu lwakudala nolwaziwayo lwamaphupha. Nabani na onqunyulwe intloko woyikisela ukuba aphulukane nentloko yakhe; Awunakuthembela kubunyulu bakho ngoku kwaye kufuneka uqale uchache.
Nokuba isihlunu esingenantloko sithetha ngokungabinantloko ngengqondo yokuzekelisa. Intloko ekhethiweyo ngaphandle kokubona umzimba ongowayo kufuneka ibonakalise ukufa kwisangqa sabahlobo okanye Unyamezelonjengesikhokelo sokunganikezeli kwaye uzingise. Ukuba iphupha elo linqumle umntu intloko, oko kuthetha ngokuphumelela uloyiso kwiintshaba zabo.
Kwamanye amaphupha, iphupha lineentloko ezingaphezulu kwesinye, liphethe into engeyiyo, engeyiyo eyayo, emagxeni okanye entloko ihleli ijonge phantsi. Le mifanekiso yamaphupha ikwabonisa ukuba ukuphupha kusongela i Amagqabantshintshi ukwaphulukana.
Ukuba unxiba intloko yesilwanyana, kuya kufuneka uthathele ingqalelo uphawu lwesilwanyana eso, kodwa kunye nemvakalelo yomntu ochaphazelekayo ngesilwanyana. Intloko yesilwanyana sasendle iyathetha Amandla kunye noloyiso lwenja, olwenja okanye lweedonki ngenxa yobukhoboka nokuzithoba, olweentaka ngenxa yokuguquguquka okanye Isidingo senkululeko.
Umqondiso wephupha «eliphambili» - ukutolikwa kwengqondo
Intloko njengesihlalo sengqondo kunye nolawulo lwengqondo kunye nomzimba ubonakalisa njengophawu lweli phupha ngokwasengqondweni ubudlelwane phakathi kwephupha ukuqonda y uvakalelo phantsi. Ukuba ulahlekelwa yingqondo ephupheni, mhlawumbi uziva udidekile kwaye awunakucinga kakuhle.
Isenokuba uyayiqhuba ukungenisa um, okanye iimvakalelo ezithile zikuthintela ekubeni ube nengqiqo malunga nento ethile. Rhoqo umntu ophuphayo akayazi le nto ingangqinelaniyo, iphupha nantsi umyalezo ovela kwi-subconscious yokugcina intloko ipholile.
Uphawu "oluphambili" lwamaphupha - ukutolikwa kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, intloko imele oko Okomoya kunye Ukucamngca. Kodwa inokwalatha kwintloko kaJohn uMbhaptizi kwaye imele isilumkiso ngokuchasene nobubi kwi el mundo Emhlabeni.